PressReader - Kwayedza: 2017-11-03 - Makwikwi eAfrican Woman of the Year
Kwayedza - 2017-11-03 - Nhau Dzemadzimai - Munyori weKwayedza
Musakanganwe kupedzisa mutsara uri pafomu iri uye kuisa zita renyu, nhamba dzepamunogara pamwe chete nedzenhare. Zvakawanda nezvemakwikwi aya onai sekushambadzwa kwazvakaitwa pazasi. Mifananidzo inotumirwa ichaburitswa muKwayedza svondo rega- rega dakara tasvika pakuhwinwa kwemibairo gore rino.
◆ rega kupenga.
Zvisinei, anoti haachazivi kune muporofita uyu — kana zita rake.
Madzibaba Paurosi anoti pamicheka yemwanasikana wake yaakatora, pane mumwe wakasungirirwa chidimbu chemari ye$2 bond note.
Mari iyi anoti imhiko yekuti iye Paurosi paanofa, mwanasikana wake uyu anofanira kubva aita mari yakawanda.
“Amai vemwana uyu ndakasiyana navo asi nguva yaakatsvaga micheka yandakatora iyi, ndivo vanga vava kugara naye uye vanoziva kuti akaenda kuninga akanobata mishonga. Pandakaenda kunotora micheka iyi, havana kunetsa nekuti vaiziva kuti nyaya dzacho dzaizogona kusarira mumawoko mavo.
“Chakanyanya kundipa shungu dzekumupengesa ndechekuti pakutora machira aya, akandivimbisa kuti ndichafa nguva diki-diki inotevera. Pari zvino ndine muteuro wandakapihwa nemutumwa wekuchechi kwangu uyo wandinofamba ndichinwa pose pandiri kudzivirira rufu rwandakavimbiswa urwu nekuti handizivi kuti mishonga yaakabata ine simba rakaita sei,” anodaro Madzibaba Paurosi.
Amai vemwana uyu avo vaimbova mudzimai waMadzibaba Paurosi, Mudawarima vanotsinhira kuti murume uyu akatora micheka yaive nemwanasikana wavo achimupomera kuti ari kuita zveSatanisim.
“Micheka yose iyi ndakaiona uye ndaizviziva kuti mwana ane micheka yakadaro nekuti ndaiona kuti anayo. Asi handina kunyanya kuita basa nazvo.
“Chandinoziva ndechekuti mwana uyu anomboita zvekubudirwa asi zvinonzi midzimu iri paari. Baba vacho vasati vava kuita zvechiporofita zvavava kuita izvi, vaimbobudirwa nemidzimu.
“Izvo zvekuti mwana wangu uyu ava kurasika njere handisati ndazvionesesa nekuti nguva zhinji ndinenge ndisinaye ndiri kubasa.
‘‘Ndozongosvika kumba manheru ndichingorara,” vanodaro.
Mai Mudawarima vanoenderera mberi vachiti: “Imwe nyaya ndeyekuti nababa vake hatichanyanyi kuita nyaya dzinoenda kure nekuti takasiyana, ini ndava nemurume wangu. Asi pamwedzi mishanu yapfuura, mwana uyu ndini ndiri kugara naye.
“Pamicheka yaanayo, mimwe yacho miviri akazoitsvaga ndava kugara naye asi anoti akaita yekutenga.”
Vanofungidzira kuti mwana wavo ane shavi revamwe tete vake hanzvadzi yaMadzibaba Paurosi izvo vanoti ndizvo zvaitaurwa apo vakanga vachiri kugara nemuporofita wekwaMurehwa uyu.
Nguva yadarika, Madzibaba Paurosi akadura kuti pamazuva ake achazvinzwa, aive neshavi rekuba uye achiita hupombwe nemadzimai akaroorwa — vamwe vacho vaakatozvarisa vana.
Anoti akadanana nevakadzi vevanhu vakawanda — mumwe wacho waanodura kuti akaita naye vana vaviri avo vari kutochengetwa nemumwe murume achifunga kuti ndevake.
Madzibaba Paurosi achiratidza mucheka waanoti waive wakasungirirwa chipenga che$2 nemwanasikana wake.